Ushwankathelo lwezixhobo / Izixhobo | I-Ota Bunkanomori
I-9: 00-19: 00 (zombini incwadi yekona kunye nekona yemultimedia)
NgoLwesine wesibini wenyanga nganye (ukuba yiholide, ngolwesiHlanu olandelayo)
Ixesha lolungiselelo olukhethekileyo (kwithuba leentsuku ezisi-1 ngonyaka)
Iziko lolwazi ngqo umnxeba 03-3772-0740
Le kwikona inomsebenzi ofanayo neThala leeNcwadi leOta, kunye neencwadi, iimagazini, iiCD, kunye nezinto ezinxulumene nale ndawo.
Indlela yokuboleka izinto okokuqala ngqa
"Ikhadi leOta leWadi eliQhelekileyo leKashidashi" liyafuneka.
Nabani na ohlala kwi-Ota Ward okanye onohambo lokuya emsebenzini okanye esikolweni kwiOta Ward angayisebenzisa.
Ukubhalisa, uya kucelwa ukuba ubonise isatifikethi (iphepha-mvume lokuqhuba, ikhadi le-inshurensi yezempilo, ikhadi le-ID yomfundi, njl.njl. Igama lakho nedilesi ukuqinisekisa ubungqina bakho.
Abo sele beyenzile kwilayibrari yewadi yeOta banokuyisebenzisa ehotele.
Inani leemali-mboleko: Ukufikelela kwiincwadi ezili-12, iimagazini, iinkqubo zamabali emifanekiso. Ukuya kuma-CD angama-6.
Ixesha lokuboleka: ukuya kuthi ga kwiiveki ezi-2
Inani lezihlalo ezijongiweyo
Ikona yamaphephandaba / yemagazini
Izihlalo ezingama-34 (kubandakanya izihlalo ezi-5 eziphambili ze-PC kunye nezihlalo ezili-11 ezenzelwe iPC)
Malunga nokubuyisa izinto xa umyuziyam uvaliwe
Nceda usebenzise "ukubuya kweposi".
* Nceda ubuyisele izinto ezi-odolwe kwithala leencwadi elingaphandle kwewadi ngqo kwifestile yethala leencwadi eliqeshisayo.
Ukuba ufuna ukufumana izixhobo, nceda sebenzisa itheminali yekhompyuter yomsebenzisi.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi njengoko sinokukunceda.
Ukuba awunazo izinto ozifunayo, ungabhukisha okanye uzi-odole kwithala leencwadi lewadi.
Unokukhangela kwaye ugcine izinto kwaye ujonge iinkcukacha zakho kwi-Intanethi.
IinkcukachaIphepha lasekhaya leThala leeNcwadi leOta Nceda ujonge kwi.
Unokufumana amava okuyila njengokusebenza kwecompyuter, ukudala amaxwebhu, i-Intanethi, ukuveliswa kwemizobo, kunye nokuhlelwa kweefoto / ividiyo.
Nceda ugcwalise ifom yesicelo kwaye ubonise "iKhadi leThala leNcwadi leOta eliqhelekileyo" kulwamkelo.Abaphulaphuli ekujoliswe kubo banqunyelwe kubafundi bezikolo zamabanga aphantsi nangaphezulu.
Ikona yamava (iimoto ezili-14)
Unamava okusebenza kweekhompyuter ezisisiseko, isoftware yeofisi enje ngeLizwi kunye ne-Excel, kunye nesoftware yokufunda enje ngeGo / Shogi kunye nesoftware yokuchwetheza.
Iyure e-1 simahla.Ungaqhubeka nokuyisebenzisa ukuba simahla.
Ikona ye-Intanethi (iiyunithi ezi-6)
Unamava okukhangela iphepha lasekhaya.
Ulwazi olufana nokuthumela ii-imeyile kunye nokuthumela kwi-SNS alunakuthunyelwa.
Imizuzu yokuqala engama-30 isimahla, kwaye imizuzu engama-30 eseleyo iya kuba yi-100 yen eyongezelelweyo.
Ikona yomsebenzi wokuyila (iiyunithi ezi-2)
Ngokucaciswa kwamadokodo kwi-Win nganye kunye neMac nganye, unokwenza imisebenzi yoyilo enje ngemveliso yegraphic kunye nokuhlelwa kwefoto / imifanekiso.I-Word, i-Excel, i-Photoshop kunye ne-Illustrator yaziswa.
Iya kuba yi-2 yen kwiiyure ezimbini.
Ungayiprinta. (A4: Monochrome 10 yen, Umbala 30 yen)
Imemori ye-USB inokusetyenziswa. (Nceda uskene intsholongwane kwindawo yolwamkelo ngaphambi kokusetyenziswa)
Akukho mqeqeshi ucacisa lo msebenzi. (Nceda usebenzise isicatshulwa osinikiweyo)
Isetelwe injongo yokubonelela ngenkonzo yoqhagamshelo lwe-intanethi ukuxhasa uphando kunye nokufunda kwabo basebenzisa iziko lolwazi.
Le Wi-Fi iyafumaneka ngexesha lokuvula kwikona yethala lencwadi nakwikona yemultimedia.
Ukuba unesiphelo sonxibelelwano esinokunxibelelana ne-LAN engenazingcingo, ungayisebenzisa simahla.
Amanyathelo okhuseleko malunga nokusetyenziswa
Sebenzisa le nkonzo, kuya kufuneka uvumelane nemigaqo yenkonzo ye-japan exhunywe kwi-Wi-Fi yasimahla.
I-Wi-Fi ayibhaliswanga ngaphandle kwefowuni ukuze uyisebenzise ngokulula. Nceda usebenzise le nkonzo kumngcipheko wakho, njengokungafaki iinkcukacha zakho ezifana ne-ID, iphasiwedi, ikhadi lamatyala, njl.
Inkonzo ayinakufumaneka ngenxa yolondolozo lwezixhobo, njl.
Xa usebenzisa le nkonzo, ihotele ayizukubekwa uxanduva kuwo nawuphi na umonakalo kumsebenzisi okanye iingxaki kubantu besithathu.